GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kiluba Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Chebara ihe mere Rachel echiche. Ọ na-agba onye mbụ ma ọ bụ onye abụọ n’ule. Ma mgbe ọ gafere na klas ọzọ, ihe gbanwere. Rachel kwuru, sị: “ Onye nkụzi anyị mere ihe niile o nwere ike ime ka m daa n’ule. ” Gịnị mere onye nkụzi ha ji mee ka ọ daa n’ule? Onye nkụzi ahụ gwara Rachel na mama ya hoo haa na ya kpọrọ okpukpe ha asị.
Olee ihe mechara mee? Rachel kwuru, sị: “ Mgbe ọ bụla onye nkụzi anyị kwadara m n’ule n’ihi na ọ kpọrọ okpukpe anyị asị, mama m na-eso m aga akwụkwọ ka ọ jụọ ya ihe mere. O mechara kwụsị ịkwada m n’ule. ”
Nke bụ́ eziokwu bụ na o nwere ike onye nkụzi ahụ agaghị akwụsịcha ihe ahụ ọ na-eme gị. Mgbe ụfọdụ, naanị ihe i nwere ike ime bụ idi ihe ahụ ọ na-eme gị. (Ndị Rom 12:17, 18) Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Tanya kwuru, sị: “ Otu onye nkụzi anyị na-emesi anyị ike. Ọ na-akparịkarị anyị, na-akpọkwa anyị ndị iberiibe. Ná mmalite, ihe ahụ ọ na-agwa anyị na-eme ka m bewe ákwá. Ma emechara m mee ka okwu ọjọọ ahụ ọ na-agwa anyị ghara ịna-ewute m. Ihe m mere bụ na a gụsiri akwụkwọ ike ma gee ntị nke ọma mgbe ọ na-akụziri anyị ihe. Nke a mere ka okwu ọjọọ ahụ ọ na-agwa anyị ghara ịna-ewute m. Esokwa m na mmadụ ole na ole mere nke ọma n’ule ya. Mgbe afọ abụọ gachara, a chụrụ ya n’ọrụ. ”